Wearing Perfume for the others! | The World of Pinkgold
Wearing Perfume for the others!
Posted on September 22, 2007 by cuttiepinkgold
တစ်ခြားသူတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ရေမွှေးဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ် မိန်းကလေးတွေအတွက် ရွေးချယ်တဲ့အခါ သူတို့ တွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ် ပြီးတော့သူနဲ့ လိုက်ဖက်မဲ့ ရနံ့ မျိုးသိထားရပါမယ် အမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်မယ် ရေမွှေးရနံ့ မျိုးတွေကတော့
ပန်းနံ့ တစ်မျိုးတည်းပါတဲ့ရနံ့(စံပယ်ပန်း၊ နှင်းဆီပန်းနံ့ တစ်မျိုးတည်းသာပါတဲ့ ရနံ့ )
အရှေ့တိုင်းဆန်တဲ့ ရနံ့( ကတိုးကောင်နဲ့သစ်မြစ်များမှရသော စူးရှတဲ့ ရနံ့ )
ပန်းပေါင်းစုံပါဝင်သော သင်းပျံ့ ချိုအီတဲ့ရနံ့ 
လန်းဆန်းတက်ကြွမှု ဖြစ်စေတဲ့ရနံ့ 
သံပုရာသီးကဲ့သို့အသီးတစ်မျိုးတည်း (သို့ ) ပိုပြီးပါဝင်တဲ့ရနံ့ 
အနံ့ မပြင်းသော သစ်ခွပန်းကဲ့သို့ ပန်းများရဲ့ ရနံ့ 
သစ်မြစ်၊ ဥစ်ဖုများနဲ့ရေညှိပင်များမှရရှိသော အဆီအနှစ်များနဲ့ ထုပ်လုပ်ထားသောရနံ့ 
ပြီးတော့ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့လူတွေရဲ့ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်း ရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ် သစ်မြစ်၊ ဥစ်ဖုများရဲ့ ရနံ့ များပါဝင်တဲ့ ရေမွှေးတွေဟာ လန်းဆန်းတက်ကြွ စေတဲ့အတွက် စိတ်ကူးထဲကသူကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်နိုင်ပါတယ်
အရှေ့တိုင်းဆန်တဲ့ ရေမွှေးမျိုးကိုတော့ လူကြီး လူကောင်းများအတွက် ရည်ရွယ်နိုင်ပါတယ်
အစိမ်းရောင်ပါတဲ့ ရေမွှေးရနံ့ ကတော့ လက်ဆောင်ပေးဖို့ အလွန်ကောင်းပြီး ၀တ်စုံကောင်းတစ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားသလို ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးတောက်ပစေပါသတဲ့
လူငယ်တွေကြားမှာ သီးခြားဖြစ်စေဖို့ပိုပြီးပေါ်လွင်စေနိုင်တဲ့ရနံ့ ကတော့ ပင်လယ်ကိုကြည့်ပြီး ခံစားရစေနိုင်သလိုမျိုး တက်ကြွတဲ့ရနံ့ မျိုးတွေနဲ့ အတူ လွပ်လပ်တဲ့နေ့ တွေကို ဖြတ်သန်းရသလို ခံစားရစေနိုင်တဲ့ ရနံ့ မျိုးဖြစ်ပါတယ်
သစ်သီးပါတဲ့ ရနံ့ မျိုးကတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပူနွေးတဲ့ရာသီမှာ သင့်တော်ပါတယ် ပန်းရနံ့ ပါတဲ့ ရေမွှေးကလည်း ကွဲပြားတဲ့ ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်တဲ့